Homeसमाचारटिकटकमा फलोअर्स् बढाउने चिन्ता छ? १० करोड फलोअर्स् भएकी यी किशोरीबाट सिक्नुहोस् (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 16, 2021 admin समाचार 5958
१६ बर्षकै उमेरमा १० करोड मानिसले बि’श्वास गर्नु? सुन्दा अकल्पनीय लाग्छ तर यो सत्य हो । एक १६ वर्षीया किशोरी भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमा १० करोड फलो’अर्स पाउने पहि’लो व्यक्ति बनेकी छिन् ।
टिकटकमा १० करोड फलो’अर्स पाउने चार्ली डिमेलियो अमेरिकी ना’गरिक हुन् । चार्लीले झन्डै डेढ वर्षको अव’धिमा नै यो उपलब्धि हासिल गरेकी हुन् । एउटा युट्युब भिडियोमा चार्लीको व्यव’हारलाई लिएर विवाद भएको भोलिपल्ट उनले उपल’ब्धि हासिल गरेकी हुन् ।
आफ्नो परिवारसँगको रिया’लिटी सिरिजको पहिलो एपिसोड डिनर विथ द डिमेलि’योज्मा उनले खाना तयार बनाउने शेफलाई अ भ द्र व्यवहार देखाएको उनका फ्यानले दा’बी गरेका छन् । त्यसको विरोधमा ६ लाख फ्यानले उनलाई अन’फलो नै गरे ।
डिमोलियाले एउटा माफी मागेको भिडियो शेयर गरेपछि अहिले वि’वाद मत्थर भएको छ र आउँदा दिनमा यस्तो व्यव’हार नगर्ने बताएकी छिन् ।आफ्नो उपल’ब्धिलाई लिएर उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेकी छिन्, १० करोड जनाले मलाई सपोर्ट गरि’रहेका छन्, पत्याउनै गाह्रो छ ।
उनले टिक’टकमा विशेषगरी बन्द कोठामा ना’चेको भिडियो शेयर गर्दै आएकी छिन् । यी १६ वर्षीया किशोरी बहुप्र’तिभाशाली छिन्, उनले फिल्मका साथै ठूला मे’कअप तथा फेसन ब्राण्डसँग काम गरिस’केकी छिन् । – इताजा खबरबाट
October 8, 2020 admin समाचार 11651
January 7, 2021 admin समाचार 7137
September 14, 2020 admin समाचार 14745
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228130)